မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော မျိုးစိတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
IUCN ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဆင့်အတန်း
IUCN Red List ၏ မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော မျိုးစိတ် (Vulnerable species - VU) ဆိုသည်မှာ ဇီဝမျိုးစိတ် တစ်ခု (ဝါ) တစ်စုသည် ၎င်းတို့၏ရှင်သန်နေထိုင်မှုနှင့် ပေါက်ဖွားမှုတို့အား ခြိမ်းခြောက်ခံနေရခြင်းမျိုးမရှိဘဲ မဝေးတော့သည့် အနာဂတ်ကာလ၌ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ် ကျရောက်လာနိုင်ကြောင်းကို ၎င်းမျိုးစိတ်အပေါ်သို့ နိုင်ငံတကာ သဘာဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (IUCN)မှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
IUCN အနီရောင်စာရင်း၏ သတ်မှတ်ချက်များ
ဒေသရင်း၌ မျိုးသုဉ်းပြီး (EW)
အထက်ပါ IUCN အနီရောင်စာရင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်
အောက်ပါ NatureServe သတ်မှတ်ချက်အား နှိုင်းယှဉ်မှု
မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်စွမ်းသည် အဓိကအားဖြင့် မျိုးစိတ်များ၏ နေထိုင်ကျက်စားရာ နေရာများဆုံးရှုံးခြင်း (သို့) ပျက်စီးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သော မျိုးစိတ်များသည် ၎င်းတို့အပေါ်သို့ အန္တရာယ်ကျရောက်မှု ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်သောကြောင့် သူတို့၏ ဒေသရင်းနယ်မြေများအား စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးရန် လိုအပ်သည်။ ဤအဆင့်အတန်းမျိုး သတ်မှတ်ပေးရသည့် မျိုးစိတ်များ၏ အများစုသည် လူသားများ ဖမ်းယူမွေးမြူလေ့ရှိသော (သို့) ယူဆောင်စိုက်ပျိုးလေ့ရှိသော မျိုးစိတ်များ ဖြစ်ကြသည်။
စနဲပင်ဂွင်းများ (Eudyptes robustus) သည် မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော မျိုးစိတ်များအတွက် သာဓကတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ဤအဆင့်အတန်းအား တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်ပေါင်း (၅၁၉၆) မျိုးနှင့် အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း (၆၇၈၉) မျိုးကို သတ်မှတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ရာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ထိ တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ် (၂၈၁၅) မျိုးနှင့် အပင်မျိုးစိတ် (၃၂၂၂) မျိုး သတ်မှတ်ခဲ့မှုနှင့် အရေအတွက်ခြင်း နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်သည်။  သတ္တဝါ မျိုးရိုးဗီဇ အရင်းအမြစ်များ အေးခဲထိန်းသိမ်းခြင်း (Cryoconservation of animal genetic resources) ကဲ့သို့သော လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု ကိစ္စရပ်များသည် မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သော မျိုးစိတ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ သဘာဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းသည် ဤအဆင့်အတန်းအား မျိုးစိတ်များအပေါ် သတ်မှတ်ရာတွင် စံချိန်စံနှုန်းများစွာဖြင့် တိုင်းတာလေ့ရှိသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန
တောဘုရင် (သို့) သားရဲဥသျှောင်
အန္တရာယ်ကျရောက်နေသော မျိုးစိတ်များဆိုင်ရာ IUCN အနီရောင်စာရင်းတွင် အတည်ပြု ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသော မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော မျိုးစိတ်များ စာရင်း
↑ CITES (ဇွန်လ ၂၀၁၂). "တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှုအဆင့်အတန်းများ" (in မြန်မာဘာသာ) (PDF). CITES ကွန်ဗင်းရှင်း နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်များ လက်စွဲစာစောင် (၂/ ၂၀၁၂): စာ(၇~၁၀). သစ်တောဦးစီးဌာန.
↑ IUCN (ဇွန် ၂၀၁၆)။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ IUCN Red List စာရင်းဝင် အပင်မျိုးစိတ်များ (PDF)။ သစ်တောဦးစီးဌာန။ pp. ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသော မျိုးစိတ်များ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ IUCN Category များ
↑ ၃.၀ ၃.၁ IUCN RED LIST CATEGORIES AND CRITERIA (2000-02-09)။
↑ IUCN (2012)။ IUCN Red List version 2012.2: Table 2: Changes in numbers of species in the threatened categories (CR, EX, VU) from 1996 to 2012 (IUCN Red List version 2012.2) for the major taxonomic groups on the Red List။ 27 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော_မျိုးစိတ်&oldid=727407" မှ ရယူရန်
၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။